Bogga ugu weyn / blog / In ka badan 10,000 Hambalyo ah Naqshadaynta Musqusha, Ururinta La Soo Jeediyay!
2020 / 10 / 23 Qoondayntablog 1096 0
Qurxinta guri cusub waa waxyaabaha ugu farxadda badan ee aad sameyn karto, waana halka aad ku ridi karto dhammaan riyadaada mustaqbal wanaagsan. Waxaa la dhihi karaa rajadayada mustaqbalka oo dhan waxay ku qarsoon tahay qurxinta gurigeenna.
Marwalba ma sahlana in la helo xalka ugu fiican, gaar ahaan markay tahay qaabeynta musqusha.
Reer Yurub, Mareykan, Xadgudbayaal, Ministariiste, Iskandaneefiyan, Shiine, Jabaaniis, qaabab kala duwan oo guryo ah, mid walibana leh quruxdiisa gaarka ah, ama mid casri ah, sharaf leh ama qurux badan, avant-garde qabow, ama fudud oo cusub
Labbis iyo Ficil ahaaneed – Fududeyn Casri ah
Habka ugu yar ee casriga ah waa mid ka mid ah qaababka ugu badan ee nolosha. Fududeynta macnaheedu maahan wax fudud. Habka Minimalist wuxuu umuuqan karaa mid fudud, laakiin si isku mid ah waa muuqaal iyo casri ah.
Habka ugu yar ee casriga ahi waa qaab naqshad caan ah oo maanta ka jira bulshada caalamka dadkuna da 'kasta oo ay doonaan ha aqbalaan oo way jecel yihiin qaabkan
Fudeydku ma sahlana.
Nadaafadu sidoo kale waa qurux.
Kaydad Badan, Awood Leh
Awoodda khaanadda weyn ee layaabka leh
Waayeelnimo buuxda - Style Iftiin iyo Xad-dhaaf ah
Habka xad dhaafka ah, Qaab-dhismeedka xad-dhaafka ah ee xoogga saaraya tayada sare, raaxada ma aha mid xarago leh
Waa inaan idhaahdaa qaabkan xad-dhaafka ah ee la sifeeyay oo heerkiisu sareeyo ayaa runtii soo qabtay indhaha dad badan oo waji ah iyo dad tayo-kontorool leh, waana mid ku habboon qoysaska raadinaya nolol tayo sare leh.
Xad-dhaaf ah macnaheedu maahan inuu yahay mid caan ah.
Codadka macdanta ah ee ku habboon
Waxay siineysaa booska oo dhan dareen qiimo leh.
Naqshadeynta muraayadda Feng Shui, jilicsan oo xariif ah
Miisaska cad, nadiif ah oo xarrago leh
Shakhsi Gaaban - Qaabka Warshadaha
Dareenka moodada ah qaabka warshadaha noqon karaa mid aad u awood badan.
Bir bir ah, madow, caddaan iyo midab cawlan, oo ay ka buuxaan da'da caqliga iyo warshadaha aan xadidnayn. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu leeyahay shakhsiyad adag oo ay jecel yihiin kooxaha dhallinyarada ah.
Madow, caddaan iyo cawl isku jira xariifnimo
Madow wuxuu noqon karaa muuqaal qurux badan.
Ku-darka iftiinka wuxuu siinayaa booska tikniyoolajiyad
Basin yar oo yar yar oo leh shakhsiyad buuxda
Classical Iyo moodable – Qaab Cusub oo Shiineys ah
Qaabka cusub ee Shiinaha, si bilic-dhaqameedka soo jireenka ah ee moodka casriga ah loogu celiyo, aqal-dhaqameedka aqal-dhaqameedka Shiinaha iyo xarrago ee labada dabeecadood, isku-darka fasalka iyo moodada, hanashada qaabka Shiinaha ee cusub.
Waxaa la dhihi karaa qaabka cusub ee Shiinaha wuxuu mideeyaa bilicsanaanta jiilka waalidka iyo jiilka soo koraya.
Gobannimo iyo xarrago wada nool
Meelo badan oo bannaan
Waxay ka ilaalisaa booska inuu noqdo mid xad dhaaf ah
Wuxuu na siiyaa qol badan oo aan ku fikirno.
Naqshadeynta calaamadaha, farshaxan aad u fara badan
Waxyaabaha birta ah ee muuqaalka xad-dhaafka ah
Dadka da 'kala duwan, shakhsiyaad, iyo baahiyo kala duwan ayaa leh dookhyo kaladuwan oo loogu talagalay qaababka guryaha. Qaab waliba wuxuu leeyahay shaqsiyad iyo macno gaar ah.
Naqshadaha guryaha ee kaladuwan ayaa soo bandhigi kara dabeecado kala duwan. Xullo naqshad aad ku qanciso oo aad ka dhigto mid faraxsan.
Hore:: Ma ogtahay sida xun ee musqusha “uraya” u tahay? Raadi Isha saxda ah ee lagu hagaajin karo! Next: Ayaa Leh Audacity Si Uu Kaymaha Uguro Musqusha! Laakiin Waan jeclahay ~~~